जियान, चिनियाँ शहर टेराकोटा योद्धाको भ्रमण गर्दै यात्रा समाचार
जियानका योद्धाहरू यस चिनियाँ सहरको tourist० लाख भन्दा बढी जनसंख्याको मुख्य पर्यटक आकर्षण हुन् जुन देशको उत्तरमा अवस्थित छ, यो मंगोलियाको सिमानामा छ। यद्यपि यस शहरको भवनहरू, स्मारकहरू, भित्ता वा रमणीय मुस्लिम क्वार्टरमा चिन्न बढी आकर्षणहरू छन्।
अर्को, हामी जियानको सडकहरूमा हिंड्यौं सुदूर पूर्वको सबैभन्दा प्रसिद्ध टेराकोटा सैनिकहरूको भूमि अझ थोरै जान्नको लागि। तपाईं हामी संग आउन सक्नुहुन्छ?
1 जियान कहाँ अवस्थित छ?
2 जियान पर्यटक आकर्षणहरू
2.1 जियानको योद्धा
2.1.1 किन शि होang को थियो?
2.1.2 पुरातात्विक साइट कस्तो छ?
3 जियानको मुस्लिम क्वार्टर
4 जियानका अन्य दृश्यहरू
जियान कहाँ अवस्थित छ?
सियान शानक्सी प्रान्तको राजधानी हो। यो उत्तरी चीनमा अवस्थित छ, मंगोलियाको सिमाना नजिक रहेको, र देशको सब भन्दा पुरानो र सबैभन्दा ऐतिहासिक शहरहरू मध्ये एक हो। थप रूपमा, यो प्रसिद्ध रेशम रोडको पूर्वी टोकु मानिन्छ, यो ग्रहको व्यस्त व्यापारिक मार्गहरू मध्ये एक हो।
जियान पर्यटक आकर्षणहरू
यो यसको मुख्य पर्यटक आकर्षण हो र यो सियानबाट एक घण्टाको बस सवारी हो। सम्राट किन शि हुआangको समाधि आधुनिक युगको सबैभन्दा ठूलो खोजी हो। जस्तोसुकै अवस्थामा पनि, यो खोज १ 1974 .XNUMX मा भाग्यपूर्वक भयो जब केही किसानहरूले कुवाको निर्माण गर्ने क्रममा योद्धा भएको गुम्बज संरचनामाथि ठक्कर दिए।
त्यसबेलादेखि पुरातत्वविदहरूले ,6.000००० भन्दा बढी आंकडा फेला पारेका छन्, ती सबै एक अर्काबाट अनुमानित कूल ,8.000००० मध्ये। तर टेराकोटा आर्मी भनेको केवल जमिनमुनि लुकेका चीजहरूको आइसबर्ग मात्र हो।
सम्राट किन शि हुआangको समाधिस्थलमा अझै धेरै खजानाहरू भेट्टाउन बाँकी छ, जुन २,२०० वर्ष भन्दा बढी रहेको तीन तलाको, 2.200-मिटर अग्लो पिरामिडभित्र छ, जुन पृथ्वीले ढाकिएको छ र जटिल प्रणालीद्वारा संरक्षित छ। जल निकासी र जालहरू द्वारा कि यो शुद्ध इन्डियाना जोन्स शैली को पहुँच गर्न रोक्छ।
जस्तोसुकै भए पनि, सरकारले कुनै जोखिम लिन चाहँदैन र पिरामिड र किन प्यालेसको अनुसन्धानको लागि ठीक क्षणको लागि पर्खनु पर्दछ जब प्रविधि अझ उन्नत हुन्छ।
किन शि होang को थियो?
सम्राट किन शि हुआang चीनको पहिलो एकीकरण शासक र पहिलो पर्खालको निर्माणमा अग्रदूत थिए। आफ्नो बौद्धिक सैन्य रणनीतिलाई धन्यवाद छ, उसले ईसापूर्व २२१ तिर ईसापूर्व एकता नभएसम्म वरपरका सामन्ती राज्यहरूलाई गाँस्न सके।
ईसापूर्व २१० मा सम्राटको मृत्यु भयो, जुन देशको दक्षिणी यात्राको क्रममा तिनीहरूले अमरको पौराणिक टापुहरूमा अनन्त जीवन खोजिरहेका थिए भन्छन्।
हुनसक्छ यो डरको कारणले गर्दा उसका शत्रुहरू उनी पछि हुने जीवनमा बदला लिन चाहन्छन वा केवल आफ्नो मेगालोमेनियाको कारणले, सत्य यो हो कि उसले एक विशाल मकबरा निर्माण गर्न आदेश दियो जसले पृथ्वीमा उसको शक्ति रेकर्ड गर्दछ।
पुरातात्विक साइट कस्तो छ?
पुरातात्विक साइट पहाडले घेरिएको छ र तीन साइटमा विभाजन गरिएको छ। भ्रमण सुरु गरेको बखत, तिनीहरूलाई अन्तिम इन्क्लेभमा देख्नु (कम्तीमा हडताल गर्ने) भेट्न लायकको छ र माथि नजानु सम्म तपाईं ढु the्गाका योद्धाहरू भेट्टाउनु भएको ठाउँमा पुग्नुहोस्, केही पुनर्निर्माण गरियो र अरूहरू भुइँमा टुक्रिए। ।
यी सिपाहीहरूले विशाल भौगोलिक र मानवीय आयामहरूको विचार दिन्छन् जुन प्राचीन कालदेखि नै चीनलाई परिभाषित गरिएको थियो। यो कुरा पनि उल्लेखनीय छ कि प्रत्येक जियान योद्धाको आफ्नै कपडा र पोजहरूमा व्यक्तिगत फिजोगोमी र व्यक्तिगत विवरण छ।
उत्खननको वरिपरि पसल र रेष्टुरेन्टहरूको पर्यटक नेटवर्क दिन खर्च गर्नका लागि खुला हुन्छ जहाँ तपाईं सबै प्रकारका फास्ट फूड र स्मृति चिन्हहरू किन्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईंसँग यसलाई हेर्न एक दिन मात्र छ, यो फिर्ता राम्रो हुन्छ र अन्य विकल्पहरूको साथ समयको फाइदा लिनुहोस्।
जियानको मुस्लिम क्वार्टर
जियानको महान मस्जिद
बुथहरू र स्टालहरू भरिएका छन्, यो खानको लागि सियानको सुरम्य मुस्लिम क्वार्टरमा भ्रमण गर्न लायक छ। त्यहाँ तपाईं मासु वा तरकारीले भरिएका बलहरू, याang राउ पाओ मो (रोटीको टुक्राको साथ भेडा शोरबा सूप), लिiang्पीपी (चिसो चाउचाउ) वा काबोब्स (मीट स्कीवर्स) जस्ता स्वादिष्ट पदार्थहरूको स्वाद लिन सक्नुहुन्छ। यस क्षेत्रको सियानको ग्यास्ट्रोनोमीको बारेमा सबैभन्दा ध्यान आकर्षण गर्ने एउटा चीज यो हो कि तपाइँ मुस्लिम खानाको तर पनी चिनियाँ शैलीमा विशिष्ट पकवानहरू चलाउन सक्नुहुन्छ।
इस्लाम एक सहस्राब्दी भन्दा पहिले यस क्षेत्रमा बसोबास गर्‍यो तर यसको अभ्यासलाई 651 50.000१ एडीबाट अनुमति दिइयो र आज हुई जातीय समूहका XNUMX०,००० भन्दा बढी मानिसहरू बसोबास गर्छन्। जियानको ग्रेट मस्जिद देशको सब भन्दा ठूलो हो र यसले चिनियाँ र इस्लामिक वास्तुकलाको मिश्रण भएकोले धेरै विचित्र वास्तुकला प्रस्तुत गर्दछ। ठूलो मस्जिद भित्र हामी भवन र बगैंचा क्षेत्र को मिश्रण संग चार चोक लाग्छ। तेस्रो आंगनमा विशेषता प्रार्थना टावर हो र चौथोमा, हजार व्यक्तिको लागि बस्ने क्षमतासहितको कोठामध्ये सबैभन्दा ठूलो।
जियानका अन्य दृश्यहरू
सियानको सबैभन्दा उल्लेखनीय स्मारकहरूमध्ये एउटा बेल टावर हो, वर्ग आकारको भवन जुन सामान्य चिनियाँ छानाले ढाकिएको छ। पौराणिक कथाका अनुसार यस टावरमा समावेश गरिएका घण्टीहरू ड्र्यागनलाई डराउनका लागि बनाइएको थियो।
अन्य चाखलाग्दो स्मारकहरू ड्रम टावर (१ XNUMX औं शताब्दीदेखि भित्र र भित्र ड्रम समावेश गर्दछ) र मातृ अनुग्रहको मन्दिरको छेउमा रहेको ग्रेट वाइल्ड हज प्यागोडा हो।
हामी प्रभावकारी पर्खाललाई बिर्सन सक्दैनौं जुन सियानको चारैतिर छ, जुन चीनको सबै भन्दा राम्रो संरक्षित छ जुन १ XNUMX औं शताब्दीमा अघिल्लो एकको माथि निर्माण गरिएको थियो। यो खोरले घेरिएको छ र प्यारापेट र टावरहरू द्वारा विराम चिह्न छ। यसको उचाई १२ मिटरसम्म छ यसैले यसको दृश्य दृश्यहरू छन् र सबैभन्दा ठूलो हो जुन आन्तरिक चीनमा अवस्थित छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » एशिया यात्रा » चीन » सियान, टेराकोटा योद्धाको चिनियाँ सहर भ्रमण गर्दै